Lacagta TVga oo aan wax laga badali doonin | Somaliska
Lacagta dadka badani ay necebyihiin ee ay qaado hay’ada Radiotjänst ee lagu bixiyo qarashka telefishinada ayaa dowladu go’aamisay in aan waxba laga badali doonin. Arintaan ayaa ka dambaysay ka dib markii bishii hore la soo bandhigay qorshe lacagtaas loogu badalayo canshuur.
Wasiirka dhaqanka Sweden Lena Adelsohn Liljeroth ayaa sheegtay in ay sii wadayaan baaritaan lagu samaynayo qaabka loo casriyayn karo lacagta telefishinka balse qorshaha hada la soo bandhigay uusan ahayn mid ay ku qanceen. Ilaa inta laga samaynayo qorshe cusub ayaa arintu sidii hore ku sii socon doontaa.
Lacagta TVga ayaa waxaa lagu bixiyaa qarashka ku baxa telefishinada SVT, idaacada Sweden (SR) iyo Kanalka waxbarashada Utbildningsradio (UR). Ujeedadu lacagta dadka looga qaado ayaa ah in telefishinadaan ay noqdaan kuwo ka madax banaan danaha siyaasiyiinta iyo shirkadaha.
asc dhamaan bahda somaliska waxan rabey inaan ogaado go aanki lafaha baadhista ee joojiyey axan ku arkayey somaliska in dadkii hore ee lafaha laga baadey wax looqaban doono ama go.aan laga gaadhi doono aniga markan waddankan imanayey waxn isku dhiibey da.yar waana laiidiiday sharci kadib markey lafaha igabaadheen